WARKA HOUD |
Xidhiidhiyayaasha korontada ayaa xukumi doona
Horumarka degdegga ah ee warshadaha isku xira korontada ayaa qiyaas ahaan lagu soo koobi karaa qodobbada soo socda. Marka hore, koboca degdegga ah iyo xoogga wadista shirkadaha maxalliga ah ee sarreeya. Intaa waxaa dheer, warshadaha isku xira korontada waxaa saameeya teknolojiyadda, taas oo ka dhigaysa marinka gelitaanka shirkad cusub ...
Heerka isku xirayaasha korontada ee korontada ku shaqeeya
Gery Kissel, madaxa kooxda ganacsiga isku -dhafka ah ee iae, ayaa bayaan ku yiri: “Dhammaan aaladaha ku -dallacayaasha korontada ee ay dadku isticmaali doonaan mustaqbalka waxay yeelan doonaan hal isku -xire koronto si baabuur kasta oo koronto loo isticmaali karo in lagu dallaco. Shirkadda SAE International ayaa dhawaan ku dhawaaqday in ...
Xiriiriyaha korontada ee micro, chip, modular
Isku xiraha korontada wuxuu noqonayaa mid la yareeyo, dhuuban, jajab, isku dhafan, shaqaynaya badan, saxnaan badan iyo cimri dheer. Oo waxay u baahan yihiin si loo hagaajiyo waxqabadka dhamaystiran ee iska caabin kulaylka, nadiifinta, shaabadaysan iyo iska -caabbinta deegaanka.